पोखरा महानगरका मेयर धनराजसँग सोधियो २४ घण्टे स्पष्टीकरण « Janata Times
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार ००:००
काठमाडौं, १४ जेठ । निर्वाचन आयोगले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आयोगको बदनियतका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक निकायको मर्यादामा नबसेकै कारण ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत बदर हुन गएको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले मेयर आर्चायलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
उहाँलाई आयोग र आयोगका प्रमुख पदाधिकारीको सन्दर्भमा बोलेको विषय तथा श्रव्यदृश्य सामाग्रीहरु के कति कारणले अभिव्यक्त गरेको हो ? निर्वाचन आयोगबाट मतपत्र कसरी डिजाइन हुन्छ र मतपत्रका कुन चिन्ह कसरी राखिन्छ भन्ने जानकारी छ, छैन भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यस्तै मेयर आर्चायलाई आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुको सहमति तथा विज्ञहरुको राय समेतको आधारमा २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनदेखि प्रयोग गर्दै आएको आकार, प्रकार र ढाँचा बमोजिमको मतपत्रलाई लिएर आयोग र अन्य पदाधिकारी प्रति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुको कारण के हो ?
निर्वाचन आयोगबाट विज्ञटोलीको सिफारिसमा कानून बमोजिम गरेको निर्णयलाई कुनै पदाधिकारीको एकल निर्णय करार गरी व्यक्तिगत दुराग्रह आक्षेप लगाउन मिल्छ, मिल्दैन ? महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित व्यक्तिसँग कानून बमोजिम बदर भएको मतलाई आयोगको बदनियतले बदर भएको भनी पुष्ट्याई गर्ने आधार, प्रमाण र कारण के छ ? भन्दै प्रष्ट पार्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
निर्वाचन आयोग र यसका प्रमुख पदाधिकारीको विरुद्धमा आम नागरिक र जनसमुदायमा भ्रम छर्ने गरी सार्वजनिक वक्तव्य दिई स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठाउनु पर्नाको कारण खुलाई पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? बाढी र पहिरोका कारण आज यी सडक छन अवरुद्ध
काठमाडौं, असार १५। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण आज देशका विभिन्न सडकहरु अवरुद्ध
बामदेवको पार्टी गठनमा पत्नी र छोरालाई सांसद बनाउने अन्तिम लक्ष्य, यस्तो छ तथ्य
काठमाडौं, असार १५ । पारिवारिक मोह र पदीय आशक्तिले मानिसलाई कतिसम्म तल पुर्याउँछ भन्ने तथ्यलाई
बुटवल, १५ असार, । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको
एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, यस्तो छ कारण
पोखरा, असार १५ । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलले बजेटमाथि छलफल सुरू नभए मुख्यमन्त्रीको
बीपी प्रतिष्ठान धरानमा क्यान्सर ट्युमरको दुर्लभ र जटिल शल्यक्रिया
सुनसरी, असार १५ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको न्युरो सर्जन युनिट र कार्डियो
काठमाडौं महानगरका सडकमा खानेकुरा बेच्न प्रतिबन्ध
काठमाडौं, असार १५ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध गरेको छ। बिभिन्न शहरमा
काठमाडौं, असार १५ । आज पनि मुलुकभर वर्षा हुने भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका
थाहा पाउनुहोस तपाईंको आजको राशिफल
आज १५ असार २०७९, बुधबार । जुन महिनाको २९ तारिक २०२२ । असारकृष्णपक्ष औशी पर्यन्त